गुरुको गोडामा पुलिसको लाठी ! – Jana Prashasan
गुरुको गोडामा पुलिसको लाठी !
आन्दोलनरत शिक्षकले माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गरेर अघि बढेका थिए । शिक्षकहरु वानेश्वर पुगेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो । वानेश्वरमा प्रहरीले रोकपछि नारावाजीमा उत्रेका उनीहरुलाई पछि हट्न प्रहरीले अनुरोध गरे पनि नमानेपछि सुरुमा पानीको फोहोरा हानिएको थियो ।पानीको फोहोराले पनि शिक्षकलाई हटाउन नसकेपछि लाठी प्रहार गरिएको थियो ।
आफ्नो माग पुरा गराउन देशभर बाट काठमाडौंमा प्रदर्शनमा निस्किएका राहत शिक्षकमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको छ । विभिन्न पेशागत माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका सरकारी विद्यालयका राहत शिक्षक र प्रहरीबीच वानेश्वरमा झडप भएको हो । आफूहरुको माग विपरित शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । झडपमा केही शिक्षक घाइते भएको उनीहरुले बताएका छन् । आन्दोलनरत शिक्षकले माइतीघर मण्डलामा कोणसभा गरेर अघि बढेका थिए । शिक्षकहरु वानेश्वर पुगेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो । वानेश्वरमा प्रहरीले रोकपछि नारावाजीमा उत्रेका उनीहरुलाई पछि हट्न प्रहरीले अनुरोध गरे पनि नमानेपछि सुरुमा पानीको फोहोरा हानिएको थियो ।
पानीको फोहोराले पनि शिक्षकलाई हटाउन नसकेपछि लाठी प्रहार गरिएको थियो । केहीको टाउकोमा चोट लागेको छ । केहीको खुट्टा समेत भाँचिएको छ ।